"Achieve Justice by Combating Impunity" - International Day in Support of Victims of Torture (26 June 2020) - AJAR
“Achieve Justice by Combating Impunity” – International Day in Support of Victims of Torture (26 June 2020)
on: June 28, 2020 In:
On this International Day in Support of Victims of Torture, Women’s League of Burma (WLB), Network for Human Rights Documentation – Burma (ND-Burma), Assistance Association of Political Prisoners (AAPP), Vimutti Women’s Organization (VWO) and Asia Justice and Rights (AJAR) are calling for an end to torture, and for reparation and justice for torture survivors.
To mark this important day, and amidst restrictions to organise gatherings, we created animation films entitled “Achieve Justice by Combating Impunity”, which illustrate how torture is used in Myanmar and the impact it has on survivors.
In Myanmar, torture is widely used in conflict areas. Amidst the Covid-19 pandemic, despiteawide call globally and locally for an immediate ceasefire, the Myanmar army announced onlyalimited ceasefire which does not cover the most active conflicts. On the contrary, the army is intensifying fighting in several areas including in Rakhine State, which leads to additional human rights violations including torture, against civilians. In several recent cases brought to light by social media, the Myanmar army was forced to admit that their troops committed torture, but justice processes are still elusive.
In addition, sexual violence asaform of torture in ethnic conflict areas continues to be documented, as well as the use of torture in detention centers and interrogation centers, often in an effort to procure information or to force confessions. It is the government’s responsibility to stop and prevent torture in its jurisdiction, and to prosecute and punish those who commit it. However, impunity still prevails and perpetrators remain unpunished.
In this context of the Myanmar government’s failure to take action, the recent proceedings at the International Criminal Court (ICC) and the International Court of Justice (ICJ) are welcome steps towards ending the culture of impunity and bringing justice for torture survivors.
The Myanmar government and the international community also haveaduty to protect the rights of torture survivors and to provide appropriate remedies for the crimes committed against them. In addition to reparations, they must provide torture survivors with urgent interim relief, acknowledge the wrongs done to them, and prevent torture from recurring.
Download Statement : International Day in Support of Victims of Torture - English
ယနေ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၆ရက် ကျရောက်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရသူများကို ကူညီထောက်ပံ့ရေးနေ့အား အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) (WLB)၊ လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ရက် (မြန်မာနိုင်ငံ) (ND-Burma)၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP)၊ ဝိမုတ္တိအမျိုးသမီးအဖွဲ့ (VWO) နှင့် အာရှတရားမျှတမှုနှင့်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့ (AJAR)တို့မှ ပူးပေါင်းပြီး ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများကို အဆုံးသတ်ရန်နှင့် အသက်ရှင်လွတ်မြောက်လာသူများ အားလုံးအတွက် လွှမ်းခြုံနိုင်သော ပြန်လည်အစားထိုးကုစားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တရားမျှတမှု လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖေါ်ဆောင်ရန် သက်ဆိုင်သူအားလုံးအား တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။
ယခုအခါ Corona Virus, Covid-19 ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ဆိုက်ရောက်မှုကြောင့် အခမ်းအနားများ၊ လှုပ်ရှားမှု များ ပြုလုပ်ရန် အခက်အခဲများစွာရှိသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားလျှက်ရှိသော ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု ခံရမှု များနှင့် ပတ်သက်၍ “တရားမျှတမှုရရှိရေး၊ ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်း ကင်းလွတ်ခွင့်ရ ဓလေ့အား ရပ်တန့်ပေး” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် သရုပ်ဖော်တင်ဆက်မှု (Animation) တခုကို ပြုလုပ် ဖော်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ သရုပ်ဖော် တင်ဆက်မှုကို https://youtu.be/AqDow_MqNxA နှင့် https://youtu.be/nQRUUuFKOrs ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာဒေသများအတွင်း ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုဖြစ်စဉ်များ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို တခြားနိုင်ငံနည်းတူ မြန်မာ ပြည်သူပြည်သားများ ခံစားကြရပြီး ထိုကပ်ရောဂါ မပြန့်ပွားစေရန်အတွက် တိုင်းရင်းသားပြည်သူ တစ်ရပ်လုံးက ကာကွယ်တားဆီးတိုက်ဖျက်နေကြသည့်အတူ ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများမှ စစ်ပွဲများ ရပ်တန့်ကြပါရန် တိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်မှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။ မြန်မာ့တပ်မတော်မှ အပစ်အခတ် ရပ်စဲကြောင်းကြေညာသော်လည်း တစ်နိုင်ငံလုံးအသွင်မဆောင်ဘဲ ရခိုင်ဒေသအပါအဝင် တိုင်းရင်းသား အနှံ့အပြားတွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီး အရပ်သားများကို မသင်္ကာမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခြင်း၊ ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်ခြင်းနှင့် လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် အရပ်သားများ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သေဆုံးခြင်းများ ရှိခဲ့သည်။ မကြာသေးမီက ဆိုရှယ်မီဒီယာများမှ ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့သည့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်သည် ၎င်းတို့၏တပ်များမှ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု ကျူးလွန်ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။
ထို့အပြင် အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးသူငယ်များအား လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများကိုလည်း ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်မှုပုံစံတစ်မျိုးဖြင့် ကျူးလွန်မှုများရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပြီး ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများကို ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းများနှင့် စစ်ကြောရေးများတွင် အသုံးပြုလျက်ရှိပြီး သတင်းအချက်ရရှိရန်နှင့် အတင်းအကြပ်ဝန်ခံထွက်ဆိုစေရန် အသုံးပြုသည်ကို မကြာခဏတွေ့ရှိရဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုအပါအဝင် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကို ကျူးလွန်သည့် ကျူးလွန်သူများကို အပြစ်ပေးအရေးယူခြင်းနှင့် ထပ်မံမဖြစ်ပွားစေရန် တားဆီးကာကွယ်ရန်မှာ အစိုးရ၏ တာဝန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုပြစ်မှုများ ကျူးလွန်သူများကို အပြစ်ပေးအရေးယူခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်နေမှု အစဉ်အလာ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီး လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကိုလည်း ဆက်လက်ပေးနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျူးလွန်သူများမှာ လွတ်မြောက်နေဆဲ ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော်အစိုးရသည် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု၊ လူသားမျိုးနွယ်စုကို ဆန့်ကျင်သည့်ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်ကြောင်း စွဲဆိုချက်ဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးနှင့် နိုင်ငံတကာစစ်ခုံရုံးတွင် တိုင်ကြားမှုခံထားရသော်လည်း
နစ်နာသူများအတွက် တရားမျှတမှုရှိစေရန် စစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူများအား ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးနေပြီး အပြစ်ပေးအရေးယူခြင်းမရှိသေးပေ။
မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနှင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေဖြင့် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု ကျူးလွန်ခံရသူများ၏ အခွင့်အရေးကာကွယ်ရန်နှင့် ၎င်းတို့အပေါ် ကျူးလွန်ခဲ့သည့် ရာဇဝတ်မှုများအတွက် သင့်လျော်သော ကုစားမှု အကူအညီများပေးရန် တာဝန်ရှိသည်။ ကုစားမှုများအပြင် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု ကျူးလွန်ခံရသူများအတွက် အရေးပေါ် ကြားကာလထောက်ပံ့မှုများ၊ မှားယွင်းစွာကျူးလွန်ခံခဲ့ရမှုများအတွက် ၎င်းတို့အား အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စပ်မှုများ ထပ်မံမဖြစ်ပွားရန်အတွက် အကာအကွယ်များပေးရမည်။ ထိုသို့လုပ် ဆောင်ရန်အတွက်
– တိုင်ရင်းသားဒေသများတွင် တိုးချဲ့ထားသော တပ်မတော်၏ တပ်ရင်းများကို ရုပ်သိမ်းရန်နှင့် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများကို ရပ်တန့်ရန်။
– အရပ်သားပြည်သူများအပေါ် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှု ကျူးလွန်သူများကို အစိုးရမှ ထိရောက်စွာ အပြစ်ပေးအရေးယူ ဆောင်ရွက်ပေးရန်။
– နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံး ခြွင်းချက်မရှိ လွှတ်ပေးရန်နှင့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကို ထပ်မံ ဖမ်းဆီးခြင်းများ မပြုလုပ်ရန်။
– ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု ဆန့်ကျင်ရေး ကုလသမဂ္ဂစာချုပ် (UNCAT) အား လက်မှတ်ရေးထိုး အတည်ပြုရန်နှင့် ဥပဒေအဖြစ်ပြဌာန်းဆောင်ရွက်ရန်။
– မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများနှင့် အခြားလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် မကြာသေးမီက တည်ထောင်ခဲ့သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှု ယန္တရားများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်။
– ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု ကျူးလွန်ခံရသူများနှင့် အခြားနည်းဖြင့်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရသူများအတွက်အစိုးရအနေဖြင့် ပြန်လည်ကုစားရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်များကို ရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော်ရန်။
– အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု ကျူးလွန်ခံရသူများ၊ လိပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခံရသူအမျိုးသမီးနှင့် ကလေး သူငယ်များအပါအဝင် အခြားနည်းပေါင်းစုံဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရသူများအတွက် အမှန်တရားနှင့် တရားမျှတမှုရရှိစေရေးအတွက် အစိုးရအနေဖြင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် မိမိတို့မှ တောင်းဆိုလိုက်သည်။
Download Statement : International Day in Support of Victims of Torture - Burmese